vendredi, 08 décembre 2017 19:42
Fianarantsoa: Fakan-kevitra momba ny sosialy sy toekarena
Miditra ho mpampifandray resaka eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fiarahamonim-pirenena ary mpandraharaha ara-toekarena ny FES na ny Friedrich Ebert Stiftung.
Nanatanteraka fakan-kevitra hatolotra an'ireo manampahefana manao lalàna izany rafitra izany ity andron'ny zoma 8 desambra ity, eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny.
Roa andro no fanetsehana momba izany eto Fianarantsoa. Mizara telo ny fanehoana ireo hevitra nangonina ireo raha aravona. Fomba an-kolaka hanerena ny solombavam-bahoaka mba hihaino amin'ny antsipirihany ireo olana sy zava-misy aty an-toerana izany, hoy ny mpanatrika sasantsasany.
Hatreto dia tanterahina sesilany ny atrikasa tahaka izao fa vitsy ny tatitra voaray momba ny fivoarany fa indrindra ny fampiharana ireo hevitra natsakaina.
vendredi, 08 décembre 2017 19:32
Mahajanga: Mpanao kidnapping miisa telo voasambotry ny Zandary
Telo mianadahy anaty tambazotra iray mpaka an-keriny avy any Toamasina voasambotry ny Zandary tao amin'ny trano iray teny Antanimalandy omaly alakamisy 7 desambra raha hikasa hanatanteraka fakana an-keriny taty Mahajanga.
Nahatratrarana vola vahiny maromaro tany amin’izy ireo.
Nalefa ao Antananarivo avy hatrany izy ireo hatao famotorana, ny “Brigade de repression des bandes organisées kidnapping”, izay nanao ny fikarohana, no handray an-tanana ny fanadihadiana azy ireo.
Mbola misy naman'izy ireo hafa karohina.
vendredi, 08 décembre 2017 19:09
Antsiranana: Olona fito maty vokatry ny fihinanana trondro “sardine”
Namono olona ny hazandranomasina. Androany izao dia olona miisa 7 hatreto no namoy ny ainy vokatry ny fihinanana ireny trondro madinika atao hoe : “sardine” ireny. Olona miisa 14 ihany koa no mbola tsaboina eny amin’ny hopital amin’izao. Tarehimarika vonjimaika ireo.
Avy any Ramena ireto hazandranomasina misy poizina namono olona ireto, no namidin'olona teto Antsiranana izao namono olona izao.
vendredi, 08 décembre 2017 19:03
Antsiranana: Fiaran’ny Polisy namotika fiara roa
Fiara Peugeot 405 sy Renault Kangoo an’ny Pharmacie Issa, rue de l'Ankarana, no indray potika nodomin’ny fiaran’ny Polisy androany, tamin’ny 4 ora maraina.
Tsy nisy aina nafoy, fa fahasimban-javatra no goavana. Vokatry ny fandehanana mafy, niharo tsy fahafehezana ny familiana no voalaza fa nihavian’ny loza.
vendredi, 08 décembre 2017 08:31
CENI: Anohana ara-bola hikarakarana ny fifidianana 2018 ny Amerikanina
Nanolotra lela vola mitentina 1,2 tapitrisa dolara ny Fitondrana Amerikanina hanohanana ny fanomanana ny fifidianana amin’ny taona 2018.
Fanohanana izay hanampy ny CENI sy ny fandraisan’anjaran’ny olom-pirenena amin’ny dingan’ny fifidianana.
Nisy moa araka izany ny sonia fifanarahana izay natao tetsy amin’ny CENI Alarobia omaly alakamisy 07 desambra.
Ny firenena Amerikanina moa dia azo lazaina fa efa maro ny fanohanana nataony tamin’ny fanjakana malagasy, raha tamin’ny taona 2016 fotsiny dia nanolotra 91 tapitrisa dolara ny teo anivon’ny USAID ho an’ny vahoaka malagasy tamin’ny alalan’ny fandaharana eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, fanjarian-tsakafo, tontolo iainana ary ny rano fisotro sy fidiovana.
vendredi, 08 décembre 2017 08:26
Anosikely: Fihaonana teo anivon'ny governemanta sy ny loholona
Notanterahana tetsy amin'ny Antenimieran-doholona Anosy omaly alakamisy 07 desambra ny fihaonana teo anivon'ny governemanta sy ny loholona, ka nisy araka izany ny tatitra nataon'ireo loholona.